Fifaninanana An-tsoratra GV: Ahoana Ny Fiantraikan’ny Politikan’ny Aterineto Ao Amin’ny Fiarahamonina Misy Anao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2014 19:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, русский, Swahili, Italiano, Português, srpski, Français, English
Sarin'ny Vondrona tamin'ny Zaikaben'ny Global Voices tany Nairobi, Kenya.
Ahoana no fiantraikan'ireo fanapahan-kevitra ara-politikan'ny orinasa sy ny governemanta eo amin'ireo mpiserasera Aterineto? Te-hahafantatra ny hevitr'ireo bilaogera, mpikatroka sy manam-pahaizana momba ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra mikasika izany ao anaty endrika famelabelarana an-tsoratra ny tetikasa Global Voices’ Advox.
Tafiditra ao anatin'ny hetsika Zaikaben'ny GV 2015 ny fanasanay ireo mpikambana sy mpiara-miombon'antoka hanoratra sy handefa famelabelarana an-tsoratra manazava – amin'ny teny mazava – ireo fiantraikan'ny politikan'ny Aterineto eo amin'ny olom-pirenena ao amin'ny firenena na faritra iray manokana. Mety hoe avy amin'ny governemanta, na avy amin'ny fikambanana mpametraka fitsipika iraisam-pirenena na koa orinasan'ny teknolojia ilay politika. Azavao ny fomba fiantraikan'ilay politika eo amin'ny olom-pirenena (mpikatroka, bilaogera, mpanoratra gazety sy ny hafa) mampiasa ny aterineto mba hanatsarana ny fahazoan'ny vahoaka vaovao, hametrahana ny andraikitry ny governemanta, na hampiroboroboana ny zon'olombelona.
Miainga amin'ny drafitrasa fanarahamaso ataon'ny governemanta, ka hatramin'ny fanivanana ny media sosialy, miainga amin'ny Zo ho Adinoina ka hatrany amin'ny aterineto tsy mitanila, manana fiantraikany lalina amin'izay azontsika atao sy izay tsy azontsika atao antserasera ny governemanta, ny orinasa ary ny mpanao lalàna (mpametraka fitsipika). Amin'ny maha-fikambanana anay, fantatray loatra izany rehetra izany – ary fantatray fa mba hahatakarana tokoa ny fihoaram-pefy iray, ny fisamborana iray, na ijerena tokoa izay niavian'ilay politika [fanaovan-dalàna] sy ny namolavolana azy, dia tena iankinan'ny ain-dehibe tokoa ny mandinika ny politikan'ny firenena, ny toekareny ary ny tantarany. Isika no tsara toerana indrindra hilaza izany tantara rehetra izany.
Tsy lahatsoratra feno fanadihadiana ara-teknika na fanombatombanana no tadiavinay fa ireo fomba mandresy lahatra manazava ireo fanamby maro manakatsakana ny fahafahana misitraka ny zo halalaka fitenenana sy hanana fiainana manokana antserasera, mba ahafahan'ny mpiserasera Aterineto mavitrika mahatakatra ny anton'izy ireny.
Ny tanjon'ity fifaninanana ity dia ny hanamafisana ireo feo sy fijerin'ny fikambanantsika, ho fanehoana amin'izao tontolo izao ny herin'ny politika [fanaovan-dalàna]. Kendrenay ny hanome voninahitra izay lahatsoratra miavaka voafakafaka sy voasoratra tsara ka omena valisoa sy fankasitrahana izany amin'ny Zaikaben'ny Global Voices 2015. Ireo mpandresy dia hahazo 1000 dolara amerikana (loka voalohany), 500 dolara amerikana (loka faha-2) ary 250 dolara amerikana ( loka faha-3). Hampahafantarina amin'ny Zaikaben'ny Global Voices 2015 ao Cebu, Filipina ireo mpandresy.
Tsara vintana isika manana vondrona mpiaro ny aterineto malalaka sy manam-pahaizana momba ny politika [fanaovan-dalàna] avy amin'izao tontolo izao izay miaraka amintsika mba hitsara ny fifaninanana. Ny fanampian'ny malala-tanana avy amin'ny Google, iray amin'ireo mpanohana ny Zaikaben'ny Global Voices 2015 no manohana ara-bola ity fifaninanana ity.
Iangaviana ianao azafady mba handefa famelabelarana an-tsoratra eo amin'ny teny 800 hatramin'ny 1 400 eo amin'ny alalan'ny fampiasana ity taratasy fenoina ity. Azo atao amin'ny teny izay tiana manana habaka mavitrika (voavao ara-potoana) ao amin'ny Global Voices ny lahatsoratra. Havoakanay amin'ny endrika mifandimby ao amin'ny tranokalan'ny Zaikaben'ny Global Voices 2015 ireo famelabelarana an-tsoratra, amin'ny alalan'ny Zon'ny mpamorona Creative Commons Attribution 3.0. Horaisinay ireo lahatsoratra nalefa teo anelanelan'ny 1 Aogositra 2014 (raha mifanaraka amin'ny lohahevitra) hatramin'ny 7 Desambra 2014. Amin'ny 11:59 alina ora Pasifika (UTC-7) amin'ny 7 Desambra 2014 no fara-fandraisana ny lahatsoratra mifaninana.
Alefaso eto ny Famelabelarana An-tsoratra nataonao!
Amerika Latina 14 ora izay
Afrika Mainty 22 ora izay